Phcoker Professional Factory Ireo mpanelanelana amin'ny fanafody sy API
Enterprise manampahaizana manokana momba ny mpanelanelana fanafody fanafody (APIs)
ISO9001: fitsipika 2000 sy fanarahan-dalàna amin'ny fenitry cGMP.
Mihoatra noho ny taona 20 taona ny fikarakarana ny pharmaceutique miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika ampy.
Miaraka amin'ny zava-bita ara-tsiansa sy ara-teknika farany, ny famokarana Shangke dia mahomby ary mahasoa ny tontolo iainana.
Ny ekipa mpanjifa mpanjifa dia manome fanohanana ara-teknika sy ara-teknika tanteraka amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana mety.
Ny vokatra madinidinika
Palmitoylethanolamide (PEA) topy maso Misy ny tatitra fa neken'ny Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina ny fangatahana f ...
Vonona hamily ny fahanterana ve ianao? Eny, zava-mahadomelina manohitra fahanterana dia tsy isalasalana fa ny safidy azo antoka indrindra amin'ny famadihana ny kôkô biolojika ...
Phcoker dia mpanamboatra matihanina magnesium L-threonate miaraka amin'ny rafitra famokarana feno izay afaka miantoka ny ampahany betsaka ...
Galantamine Hydrobromide topimaso Galantamine hydrobromide dia fanafody famoahana fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana dementia amin'ny aretin'i Alzheimer ...
Topi-maso PRL-8-53 Ny fihenan'ny PRL-8-53 ho toy ny zava-mahadomelina psychoactive dia miverina tany am-piandohan'ny taona 1970. Nikolaus Hansl, mpampianatra ao amin'ny C ...
Cycloastragenol Overview Cycloastragenol (CAG) fantatra ihany koa amin'ny hoe T-65 dia triterpenoid tetracyclic voajanahary azo avy amin'ny Astr ...
Nicotinamide riboside (NR) sy nikotinamide riboside (Chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride dia endrika iray klorinida n ...
Inona ny atao hoe Oxiracetam? Oxiracetam dia iray amin'ireo fanampiana nootropic taloha kokoa avy amin'ny fianakaviana racetam. Izy io dia ny racetam com fahatelo ...
Inona no atao hoe 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) fantatra ihany koa amin'ny hoe 9-MBC dia singa nootropic vaovao avy amin'ny vondrona β-carboline. ...
Miantso ny vaovao farany momba ny orinasanay.